Izixhobo zeMveliso | Zigong City Xinhua Industrial Co., Ltd.
Umzi-mveliso oPhambili weSixhobo seMveliso
Umatshini wokugaya weAgathon
Iziko leMatshini lokuLungisa i-axis ezintlanu
UPeter Wolters CNC Precision Double End Lapping Machine
Cofa ingqokelela yenqaba
Lo matshini ulungele i-centrifugal granulation yeekeramics, iimveliso zeekhemikhali kunye nezinye izinto. Ilungele ngokukodwa izixhobo ezinemfuno ezithile zamasuntswana ezinje ngomgubo we-carbide tungsten carbide powder, izinto ze-ceramic ze-elektroniki, i-alumina, i-iron oxide, i-tungsten carbide, njl.njl. ivili le-granulating atomizer, ubume obungqukuva Ubumanzi bemveliso bulungile, kunye nokuxinana kwemveliso ecinezelweyo kuphezulu. Xa kuthelekiswa neteknoloji yokusila yebhola yemveli, umgubo wokucheba oguqulweyo unobumba obufanayo, kwaye i-carbide eqinisekisiweyo yomgangatho ongcono.
Isithando somlilo sokucinezela esisezantsi siyahambelana nemisebenzi emininzi enje nge-dewaxing, sintering sintering, sintering esezantsi koxinzelelo, ukuqhubekeka koxinzelelo oluphantsi, kunye nokucoca umoya. Isetyenziselwa ikakhulu ukuntywila koxinzelelo lweemveliso ezicinezelweyo, ukuqhubekeka koxinzelelo olusezantsi lweemveliso ezisetyenzisiweyo kunye nokuhlengahlengiswa kwekhabhoni kweemveliso ezicofiweyo. Owona msebenzi uphambili wokucinezelwa koxinzelelo olusezantsi kukunciphisa ii-pores ezincinci kwi-carbide yesamente. Ama-pores asemzimbeni oguqulweyo asuswe ngexesha lesithuba sokucoca. Inqanaba lokucinezela ikakhulu kukususa ii-pores microscopic.
Xa ulinganisa, isixhobo sokulinganisa isixhobo somfanekiso silungelelanisa kwaye silinganisa isixhobo kumacala amabini. Iyakwazi ukuqonda umlinganiso we-X-axis, Y-axis, Z-axis, axis rotation lens axis, kunye nokujikeleza kwesixhobo ekubambeni enye, ethintela ii-axes ezininzi. Kwimpazamo eveliswe ngexesha lokubotshwa kwesibini, ukulungiswa kokujikeleza okuphezulu kokuchaneka kusetyenziswa iilensi ezimbini, eziququzelela kakhulu umlinganiso. Ububanzi, ubude, ukusika isithuba, i-rake angle, i-angle engasemva, kunye ne-helix angle yesixhobo kunokugqitywa ekubambeni. Imilinganiselo echanekileyo yemilinganiselo eyahlukeneyo enje ngeyona engile iphambili yokwala kunye nekona yesibini yokuphambuka